बुवा प्रहरी जवानले अब एसपी छोरालाई हरेकदिन सलाम ! – मुलधार न्युज
Home > समाचार > बुवा प्रहरी जवानले अब एसपी छोरालाई हरेकदिन सलाम !
उत्तर प्रदेश-भारतको उत्त‍र प्रदेशमा एउटा अनौठो समाचार सार्वजनिक भएको छ। उत्तर प्रदेशको राजधानी लखनउको एउटा प्रहरी चौकीमा बुवा प्रहरी जवानले एसपी रहेका छोरालाई सलाम ठोक्नुपर्ने भएको छ। भारतको गाजियावाद, नोएडामा कार्यरत एसपी अनुपकुमार सिंहको लखनउको प्रहरी चौकीमा सरुवा भएको छ जहाँ उनका बाबु जनार्दन सिंह प्रहरी जवानका रुपमा कार्यरत छन्।
एसपी छोरा अनुपको प्रहरी चौकीमा सरुवा भएपछि बुवा जनार्दनले उनी मातहतमा काम मात्र गर्नुपर्दैन नियमित सलाम ठोक्नुपर्ने भएको छ। स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रहरी जवान जनार्दन सिंहले छोराको मातहतमा काम गर्न पाउँदा गर्व महशुस भएको बताएका छन्।उनले भनेका छन्, म ड्युटीमा रहँदा मेरो कप्तानलाई नियमित सलाम ठोक्नेछु।
तर जर्नादनका छोरा एसपी अनुपले भने कर्तव्य निभाउनका लागि म प्रोटोकलको पालना गर्नेछु।उनले आफूले बाबुबाट कर्तव्य र संस्कार सिकेको पनि बताएका छन्। एसपी सिंहले लखनउ आउनुभन्दा पहिले गाजियावाद, नोएडा उन्नावमा एएसपीको रुपमा काम गरेको जनाएका छन्।
जवहरलाल विश्वविद्यालयको पढाइपछि उनी सिभिल सर्भिस परीक्षाको तयारीमा जुटेका थिए। लगत्तै उनले युपीएससी सिभिल सर्भिसमा नाम निकाल्न सफल भए।पछि उनी आइपीएसमा बढुवा भएका थिए। समाचारमा बताइए अनुसार अनुपले जेएनयु पढ्दै गर्दा राम्रो अंक प्राप्त गरेपछि छात्रवृत्तिसमेत पाएका थिए।
उनी छात्रवृत्तिबाट प्राप्त रकमले आफ्नो दैनिकी चलाएर बाँकी रहेको रकम घर पठाउने गर्थे। एसपी सिंहले इलाहावाद विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका हुन्।साथै उनी जेएनयुका विद्यार्थी पनि हुन्।अन्नपूर्ण
चरिकोटमा २० वर्षीय बस्नेतको हत्या